China Semi-auto Ultrasonic Tube yokuGcwalisa kunye nokuTywina kweHX-006 mveliso kunye nabathengisi | Umatshini weHX
Umthamo 18-30pcs / min
Uxinzelelo lomoya 0.6MPa
Ubukhulu L1300 * W900 * 1550mm usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
* Ukutyisa ngesandla ityhubhu, uphawu lobhaliso oluzenzekelayo oluchonga, ukugcwalisa, ukutywina ngekhowudi, ukunciphisa ukusika, ukufakela ityhubhu ngaphandle.
* Yamkela iteknoloji yokutywina ye-ultrasonic, akukho sidingo sokufudumeza ixesha, ukuzinza okuzinzileyo kunye nokucoceka okucocekileyo, akukho kugqwetha, kunye neqondo lokulahla eliphantsi elingaphantsi kwe-1%.
* I-PLC ngenkqubo yolawulo lokuchukumisa isikrini kunye ne-alam inokujonga ngokuthe ngqo ulwazi lwe-alamu kwiscreen sokuchukumisa, inokufumana ingxaki, isombulule ngokukhawuleza.
* Isikhululo ngasinye sinokulawulwa ngokuzimeleyo kwiscreen sokuchukumisa, silungele uhlengahlengiso phakathi kwemibhobho eyahlukeneyo. Abasebenzi banokusebenzisa ityhubhu enye ukuseta zonke iindawo, ukonga ixesha elininzi kunye nezinto eziphathekayo.
5. Isakhelo esinomnyango wokhuseleko sinokumisa siyeke
Egqithileyo Uqoqosho lwe-Ultrasonic Tube yokuGcwalisa kunye nokuTywina kweHX-002
Okulandelayo: Ukuzalisa ityhubhu kabini kunye nokutywina umatshini HX-009S